Nanam-pinoana i Mosesy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Garifuna Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ngabere Norvezianina Nzema Oromo Ossète Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tsonga Twi Télougou Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
Araka ny Baiboly, ny hoe “finoana” dia fatokisana tanteraka ny zavatra tsy hita maso nefa ananana porofo azo antoka. Matoky ny olona mino an’Andriamanitra fa hotanterahiny izay rehetra nampanantenainy.
AHOANA NO NAMPISEHOAN’I MOSESY FA NANAM-PINOANA IZY?
Hita tamin’ny safidiny fa nino ny fampanantenan’Andriamanitra izy. (Genesisy 22:15-18) Niadana be izy tany Ejipta. Niala tany anefa izy, ka “naleony nampijalina niaraka tamin’ny vahoakan’Andriamanitra, toy izay hifaly vetivety tamin’ny fahotana.” (Hebreo 11:25) Taitaitra fotsiny ve i Mosesy nanao izany safidy izany ka nanenina tatỳ aoriana? Tsy izany mihitsy! Milaza mantsy ny Baiboly fa “tsy azo nohozongozonina mihitsy izy, toy ny mahita an’Ilay tsy hita.” (Hebreo 11:27) Nino ny fampanantenan’Andriamanitra izy ka tsy nanenenany mihitsy ny safidy nataony.
Nanampy ny hafa hino an’Andriamanitra koa i Mosesy. Eritrereto izay nitranga tamin’ny Israelita, indray mandeha. Nihevitra izy ireo fa tapi-dalan-kaleha satria nanenjika azy ny tafik’i Farao, nefa ny Ranomasina Mena no teo alohan-dry zareo. Natahotra be izy ireo ka nitaraina mafy tamin’i Jehovah sy Mosesy. Inona no nataon’i Mosesy?
Mety ho mbola tsy fantatr’i Mosesy hoe hosarahin’Andriamanitra ny Ranomasina Mena mba hahafahan’ny Israelita handositra. Natoky anefa izy fa tsy maintsy hanao zavatra Andriamanitra mba hiarovana azy ireo. Tian’i Mosesy hatoky an’Andriamanitra koa ny Israelita, ka hoy izy tamin’izy ireo: “Aza matahotra. Mijoroa, ka jereo ny famonjen’i Jehovah izay hataony ho anareo anio.” (Eksodosy 14:13) Nahavita nanampy ny Israelita hino an’Andriamanitra ve i Mosesy? Eny tokoa! Izao mantsy no lazain’ny Baiboly momba an’i Mosesy sy ny Israelita rehetra: “Finoana no niampitan’izy ireo ny Ranomasina Mena toy ny hoe nandia tany maina.” (Hebreo 11:29) Tsy i Mosesy irery àry no nandray soa rehefa nino an’Andriamanitra, fa ny olona rehetra nanahaka azy koa.
AHOANA NO ANAHAFANTSIKA AN’I MOSESY?
Tokony ho hita amin’ny safidy ataontsika fa matoky ny fampanantenan’Andriamanitra isika. Mampanantena, ohatra, izy fa hanome izay ilaintsika raha ny fanompoana azy no ataontsika loha laharana. (Matio 6:33) Marina fa mety ho sarotra izany, satria variana mitady harena ny olona maro ankehitriny. Mila miezaka mafy anefa isika tsy hitady zavatra be dia be eo amin’ny fiainana mba ho afaka hanompo azy foana. Hanome izay ilaintsika i Jehovah amin’izay. Hoy izy: “Tsy handao anao mihitsy aho, ary tsy hahafoy anao velively.”—Hebreo 13:5.
Mila manampy ny hafa hanana finoana koa isika. Tokony ho tsapan’ny ray aman-dreny, ohatra, fa andraikiny ny manampy ny zanany hino an’i Jehovah mandra-pahalehibe azy ireo. Mila fantatry ny ankizy mantsy fa tena misy Andriamanitra ary mampianatra antsika izay mety sy tsy mety izy. Tokony ho resy lahatra koa ny ankizy fa ny manaraka izay lazain’Andriamanitra no mahasoa indrindra. (Isaia 48:17, 18) Mila ampian’ny ray aman-dreny izy ireo mba hino fa ‘misy Andriamanitra sady mpamaly soa an’izay mitady mafy azy.’ (Hebreo 11:6) Izany no fanomezana sarobidy indrindra azo omena ny zanaka!
Hizara Hizara Nanam-pinoana i Mosesy
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Ahoana no Anahafantsika An’i Mosesy?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Ahoana no Anahafantsika An’i Mosesy?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Ahoana no Anahafantsika An’i Mosesy?